Home » Ọbịa posts » HotelApp - Ntugharị Ntugharị Ntugharị Ọhụrụ nke International Travel Awards
Onyinye International Travel Awards kwalitere HotelApp - kọntaktị-obere Mobile App maka Hotel jikọtara ya na KSA Software Technology, ụlọ ọrụ teknụzụ teknụzụ kachasị, QR Code App maka Hotel nke na-enye ndị ọbịa ohere itinye akwụkwọ na ịnweta ụlọ ọrụ n'oge ọnụnọ ha na họtel ahụ.
Tụle ọnọdụ ahụ ike ọrịa HotelApp adabara ụlọ nkwari akụ ọ bụla. Ee ọ na-abịa site na ndebanye aha ọnwa dị mfe na-amalite site na GBP 69 ma ọ nweghị nnukwu ego achọrọ.
Applọ nkwari akụ ahụ anaghị achọ ntinye ọ bụla, ndị nwe ụlọ nwere ike ịnweta nyocha oge na pịa bọtịnụ. Ọbụghị naanị na ndị otu ụlọ oriri na ọ theụ hotelụ nwere ike ijikwa arịrịọ niile, mkpesa sitere na ndị ọbịa n'otu ntabi site na njikwa ha.
HotelApp na-enye ụzọ maka njedebe-na-ọgwụgwụ njikọta n'etiti họtel na ndị ọbịa ya. Ngwa a ga - enyere ndị ahịa aka ịkwado ya ma meziwanye afọ ojuju ndị ahịa. Ọ na-enye ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ toụ toụ ohere ịbawanye data ndị ahịa na nzaghachi iji melite ụlọ ọrụ na ọrụ ha.
HotelApp bu n’obi inye ulo oru ohere igbanwe ihe omuma ndi ahia ha. Ndị ụlọ oriri na ọ hotụ hotụ ahụ nwere ike ijikwa ụlọ oriri na nkwari akụ ha ma bido nkwalite na mmemme ọ bụla na clicks abụọ.
HotelApp na-enye ndị ọbịa ohere ịnweta ọrụ niile nke ụlọ nkwari akụ na-enye site na ekwentị ha. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ka onye ahịa lelee koodu QR ma tinye koodu ha pụrụ iche iji nweta ụlọ ọrụ ahụ, rịọ maka ọrụ ọ bụla metụtara ọrụ, Njem, Nọrọ na ọtụtụ ndị ọzọ Ọrụ ndị ọbịa a na-akwado ihe karịrị 1000 ọrụ wuru na-enyere gị aka ịmalite ozugbo na-enweghị itinye oge dị ukwuu n'ịgbakwunye data n'onwe gị. Ndị ahịa ahụ nwere ike ibuli arịrịọ ọrụ site na ngwa ahụ, njikwa njikwa ụlọ oriri na ọ hotelụ canụ nwere ike soro ma lebara ha anya nke ọma.
Ngwa ọrụ ime ụlọ a na-ewetara ya ọdịnihu nke menus na iri nri! Njirimara Na-enweghị Mmetụ na-enyere ndị ọrụ aka itinye iwu nri n'ụlọ nri na-ejighị menu anụ ahụ. Akụkụ a na-enye nhọrọ dịka ọnụahịa ike, menus ahaziri iche, na-egosipụta nri pụrụ iche na mbinye aka, yana nhọrọ nchịkọta nhọrọ.
Akụkụ ọzọ nke App a maka Hotel bụ Digital Spa Menu. Ihe omume a na-enyere ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ toụ toụ ohere itinye akwụkwọ spa dị iche iche nke ụlọ nkwari akụ na-enye na ntanetị. Ihe omume a na-enye ohere ka ụlọ nkwari akụ ka atụmatụ na ijikwa usoro ọrụ ndị ọrụ maka afọ ojuju nke ndị ahịa. Ngwa ahụ na-enyekwa ohere maka menu spa dijitalụ nke na-akwado ngwugwu spa ahaziri, ndokwa maka ihe oyiyi spa, na nkwalite. Nke a ga - adọta ndị ahịa azụmaahịa mara mma ma nwekwaa akwụkwọ na ụtụ.
HotelApp na-akwadokwa nhọrọ ahụ ịkwanye n'ọkwá dị iche iche ma na-enye ndị ọbịa ụlọ nkwari akụ. Akụkụ a na-enyere aka ịkwalite mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyere ndị mgbasa ozi aka ịgbasa ozi, na-abawanye iru na ego.
Ndị ụlọ nkwari akụ nwere ike ịhazi ngwa ahụ dabere na mkpa na mkpa ha. Nhọrọ maka nhazi ga-enyere ụlọ nkwari akụ aka ịhọrọ atụmatụ ndị na-egwu ike ha. Ị chọrọ na-enye a otu mgbe na-na-a-ndụ-oge ahụmahụ gị ọbịa? ọ bụrụ ee ee kpọtụrụ ndị ọrụ HotelApp na https://hotelappsoftware.com